Xasan Sheekh hadalkiisa wuxuu la mid yahay: “Quud aan jirin qoryo u guro”. - Latest News Updates
Xasan Sheekh hadalkiisa wuxuu la mid yahay: “Quud aan jirin qoryo u guro”.
Waa in horay loo socdaa, wanaaga iyo hor’umarinta waddankana aan marna la hakin.
Shirka 7 Bishaan ee lagu qabanayo London, oo ku saabsan shidaalka Soomaaliya waa arin mas’uuliyadeeda leedahay Dowladda.
Waan soo dhaweynaynaa, waxaana rajaynaynaa in hor dhac faa’iido u leh Soomaaliya la gaaro.
Qolooyinka is aruursaday oo weli u ciishoon (Siyaasiyiinta Xanaaqsan ee wax loo diiday) MW Mohamed Farmaajo, maalin kastana baraha bulshada ku af lagaadeeyo waa ayaan darro, waana mid ka fog biseel siyaasadeed.
Waa dhaqan xun oo ka tarjumayo heerka uu gaarsiinsan yahay guud ahaan aqoonta ay leeyihiin.
MW hore Xasan Sheekh ayaa yiri:
Waan ka walaac sanahay sida ay Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) u wajaheyso shidaalka Soomaaliya, waxa uu sheegay in aysan hadda Soomaaliya u diyaarsaneyn ka faa’iideysiga shidaalkeeda.
“Maanta lama gaarin wali maalintii aan sameyn lahayn shaqada Landhan loogu balansan yahay”.
Waa cajiib in MWhii hore uu qaab aan sax ahayn, wax cadayna ah aan wadan in uu si qaldan oo laab la kac ah ugu hor yimaado howl indha indhayn iyo soo ogaasho ay Dowladda ku dhaqaaqday, midda kale hadii aan hadda waxba la bilaabin goormaa la bilaabayaa?
Dowladda hadda jirta waxyaala badan ayee ka gaabisay, dhinacya badana way ku fashilantay hase ahaate Dowladaan ayaa maanta waddanka ka mas’uul ah.
Waxaa waajib ah wanaagana ku jiraa in laga wada shaqeeyo hor u marka Qaranka iyo Shacabka Soomaaliyeed, in hal dhinac looga sooo wada jeesto arimaha lidka ku ah midnimada iyo hanaanka Dowladnomo, in danta Qaranka uu noqdaa midda aan wada hiigsanayno.
Dowladda waxaan u rajaynayna in shirka London ay kala soo hoyataa natiijo wax ku ool ah oo dan u ah Qaranka iyo dhammaan Shacabka Soomaaloyeed.
Dott. Abucar Nuur Xuseyn
Gudoomiyaha Xisbiga BDem